Ch 17 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 17 Luke
17:1 Ary hoy izy tamin'ny mpianany: "Tsy azo heverina ny tantara ratsy tsy mba hisy. Fa loza ho azy amin'ny alalan'ny izay tonga!
17:2 Mety ho tsara ho azy, raha vato fikosoham-bary no nametraka ny vozony ka atsipy any an-dranomasina, toy izay hamitahany ny iray aza amin'ireny madinika ireny.
17:3 Aoka ianao hihaino ny tenanareo. Raha ny rahalahinao izay nanota taminao, nanitsy azy. Ary raha efa nibebaka, mamelà ny helony.
17:4 Ary raha nanota anao impito isan'andro, ary Impito isan'andro no hiverina aminao, nanao hoe:, 'Miala tsiny aho,'Dia mamelà ny helony. "
17:5 Ary hoy ny Apostoly tamin'ny Tompo, "Ampitomboy ny finoanay."
17:6 Fa hoy ny Tompo: "Raha manana finoana na dia hoatra ny voan-tsinapy, dia mety hilaza ity hazo voaroy, 'Miongota, ka nafindra any an-dranomasina. ', dia hanaiky anareo.
17:7 Ary iza moa aminareo, manana mpanompo miasa tany, na miandry ondry, dia lazao aminy hoe:, araka izay efa niverina avy tany an-tsaha, 'Mandrosoa avy hatrany; mipetraka hihinana,'
17:8 ka tsy hilaza aminy hoe: 'Omano ny nahandroko; Eny, misikìna ihany ny tenanao sy ny fanompoam-pivavahana ho Ahy, raha mbola nihinana sy nisotro; ary rehefa afaka izany,, dia mihinana sy misotro?'
17:9 Moa ve ho velom-pankasitrahana ho izany mpanompo, fa manao izay nandidian'Andriamanitra mba hataony?
17:10 Mino aho fa tsy. Toy izany koa, rehefa efa nanaovako izao zavatra izay nampianarina ho anao, ka hanaovanao hoe: 'Izahay mpanompo tsy misy ilana azy. Efa nanao izay tokony ho nataony. '"
17:11 Ary nony fa, raha mbola nandeha tany Jerosalema, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia.
17:12 Ary rehefa hiondrana teo tanàna anankiray, boka folo lahy nifanena taminy, dia nijanona teny lavidavitra.
17:13 Dia samy nanandratra ny feony, nanao hoe:, "Jesosy, Mpampianatra, maka mamindrà fo aminay. "
17:14 Ary rehefa nahita azy, hoy izy:, "Mandehana, misehoa amin'ny mpisorona. "Ary nony fa, raha mbola nandeha, dia nadio.
17:15 Ary ny anankiray teo aminy, raha nahita fa dia nadio izy, niverina, nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery.
17:16 Dia niankohoka teo anatrehany hiatrika ny tongony, misaotra. Ary ity iray ity dia Samaritanina.
17:17 Ary ho setrin'ny, Hoy i Jesosy: "Tsy folo nanao madio? Ary toy izany koa aiza ny sivy?
17:18 Dia tsy nisy hita izay mety hiverina sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, afa-tsy ity hafa firenena?"
17:19 Ary hoy izy taminy:: "Mitsangàna, hivoaka. Fa ny finoanao no efa namonjy anao. "
17:20 Avy eo izy dia nanontany ny Fariseo: "Rahoviana ny fanjakan'Andriamanitra tonga?"Ary ho setrin'ny, dia hoy izy taminy: "Ny fanjakan'Andriamanitra tonga unobserved.
17:21 Ary noho izany, dia tsy hoe, 'Indro, dia eto,'Na' Indro, izany no ao. 'Fa, indro, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. "
17:22 Ary hoy izy tamin'ny mpianany: "Ny fotoana ho avy rehefa dia ta-hahita indray andro any ny Zanak'olona, Ary ianareo dia tsy hahita izany.
17:23 Ary dia hilaza aminareo, 'Indro, Izy no eto,'Sy' Indro, izy no ao. 'Aza misafidy ny mivoaka, ary aza manaraka azy.
17:24 Fa tahaka ny tselatra avy any ambanin'ny lanitra sy mamirapiratra ny rehetra eny ambanin'ny lanitra, toy izany koa dia ny Zanak'olona amin'ny androny.
17:25 Alohan'izany anefa, dia tsy maintsy hijaly mafy ka holavin'ny taranaka ity.
17:26 Ary toy ny nitranga tamin'ny andron'i Noa, tahaka izany koa izany no hatao amin'ny andro ny Zanak'olona.
17:27 Dia nihinana sy nisotro; izy ireo rehefa nandray ny vady aman-hampakarina, na dia mandra-pihavin'ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo-fiara. Ary tonga ny safo-drano ka nandringana azy rehetra.
17:28 Dia ho toy izany koa ny zava-nitranga tamin'ny andron'i Lota. Dia nihinana sy nisotro; izy ireo ny fandehan'ny varotra; izy, namboly sy ny trano.
17:29 Avy eo, tamin'ny andro izay niala Lota avy tao Sodoma,, dia nisy afo sy solifara avy tany an-danitra, Ary nandringana azy rehetra.
17:30 Araka izany zavatra izany, toy izany no hatao amin'ny andro ny Zanak'olona dia hiseho.
17:31 Ary tamin'izany ora izany, na iza na iza kosa ho an-tampon-trano, ny entany ao an-trano, dia aoka tsy hidina haka azy. Ary na iza na iza no ho any an-tsaha, toy izany koa, aoka tsy hiverina.
17:32 Tsarovy ny vadin'i Lota.
17:33 Na iza na iza no nitady mba hamonjy ny ainy,, dia hahavery izany;; ary na iza na iza no very izany, hitondra izany indray ho amin'ny fiainana.
17:34 Lazaiko aminareo, amin'izany alina izany, hisy roa lahy miray fandriana. Ny anankiray horaisina, ny, ary ny anankiray havela.
17:35 Roa no hatao amin'ny grindstone miara-. Ny anankiray horaisina, ny, ary ny anankiray havela. Roa no ho any an-tsaha. Ny anankiray horaisina, ny, ary ny anankiray havela. "
17:36 Mamaly, hoy ireo taminy:, "Aiza, Tompo?"
17:37 Ary hoy Izy taminy:, "Na aiza na aiza ny vatana dia ho, ao amin'io toerana io ihany koa ny, ny voromahery dia hangonina. "